Mpanazava eto Madagasikara: misokatra ny taom-piasana | NewsMada
Mpanazava eto Madagasikara: misokatra ny taom-piasana
Nanomboka ny taom-piasana vaovao ao anatin’ny telo taona ho avy (2018-2021) ny Mpanazava eto Madagasikara, omaly. Taorian’ny fifidianana ireo tompon’andraikitra vaovao isan’ambaratongany ao anatin’ny fikambanana no nosokafana ny taom-piasana. « Tano ny finoana ho ampinga », io ny lohahevitra hovoizina ao anatin’izao telo taona ho avy izao. Filoha nasionaly vaovao i Safira Mihangy na Rakotomalala Helinoro. Nofidina nandritra ny fihaonambe natao tany Ambatomanga, ny volana septambra lasa teo, izy.
Nanomboka omaly ihany koa ny 16 andro hanaovana hetsika hiadiana amin’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy. Sehatra iray iasan’ny Mpanazava eto Madagasikara io ady amin’ny herisetra io. Hisy ny hetsika maro hatao mandritra ny 16 andro ho fandraisan anjara mavitriky ny mpikambana ao amin’ny Mpanazava manerana ny Nosy.
Fikambanana manome hasina ny ankizivavy ny Mpanazava. Tanjona ny hampatanjaka sy ny hampiroborobo ary manova ho tsaratsara kokoa hatrany ny fiainan’ny zatovovavy.
Anisan’ny laharam-pahamehana, ankoatra ny fanatsarana ny kalitaon’ny fanabeazana sy ny kalitaon’ny fiofanana, ny fampitomboana ny isan’ny mpikambana. 50 000 ireo mpikambana amin’izao fotoana izao ary ampitomboina ho 80 000 izany ao anatin’ny teo tao ho avy.
Hankalazaina ao anatin’ity taom-piasana ity ny faha-80 taon’ny Mpanazava eto Masagasikara. Homarihina amin’ny karazana hetsika marobe izany manerana ny Nosy.
Hetsika nasionaly manaraka ny fiofanana ho an’ireo mpiandraikitra mpanabe hotanterahina ny 26 ka hatramin’ ny 30 desambra ho avy izao, hiandrasana mpizaika 900 mahery avy amin’ny faritany rehetra hijoroan’ny Mpanazava eto Madagasikara.